अनिशाको झुटको पर्दाफास, आमाले रुँदै भनिन् सबै वास्तविक कुरा (भिडियोसहित) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
अनिशाको झुटको पर्दाफास, आमाले रुँदै भनिन् सबै वास्तविक कुरा (भिडियोसहित)
चितवन । अनिशा र कञ्चनको प्रेम, विबाह र सम्बन्ध विच्छेद अनि चिन्दिन भन्ने कुराहरुले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल निकै नै तातेको छ । अनिशाले कञ्चनसंग चितवनबाट काठमाण्डौ आएर सुटुक्कै विबाह गरिन् । तर विबाह गरेको तीन दिनपछि अनिशाको माईतिले उनलाई कञ्चनबाट छु’टाएपछि श्रीमती अनिशालाई लिन गएका कञ्चनलाई उनले नै चि’न्दिन भनिदिएपछि कञ्चनले सहन नसकेर वि’ष स’मेत पि’ए । अहिले उनी अस्पतालको बेडमा जीवन र मृत्युको बीचमा छन् ।
मायाले जीवन दिन्छ र मायाले नै जीवन पनि लिन्छ भन्ने भनाई यहाँ कञ्चनको जीवनमा लागू भईदिएको छ । कमलो मन भएका कञ्चनले अनिशालाई धेरै नै माया गरेका रहेछन् । उनले यो कुरा अनिशाले आफुलाई चिन्दिन भनिदिएपछि आफ्ना आमाबुवा र सबै आफन्तहरुलाई अनिशालाई कसैले पनि केही गा’ली न’गर्नु भन्दै आफुले संसार छोड्ने निर्णय गरेर पि’एको वि’षले नै बताउँछ । मायामा धो’का त सबैलाई हुन्छ । तर धोका भयो भन्दैमा जीवनको अन्त्य उसैलाई सम्झंदै कसैले पनि गर्दैन ।
साथीलाई साक्षि राखेर कञ्चनको सिंन्दुर आफ्नो सिउँदोमा भरेकी अनिशाले कञ्चनलाई चिन्दैचिन्दन भनेतापनि उनी र कञ्चनबीचका प्रमाणहरुले बोल्छन् चिन्छिन् कि चिन्दिनन् भन्ने कुरा । उनले श्रीमान कञ्चनलाई चिन्दिन भन्नुको पछाडीको कारण के छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन । तर आफुले माया गरेको मान्छे आफ्नै कारणले जीवन र मृत्यसंग ल’डीरहेको थाहा पाएपछि पनि आफ्नै अडान बस्नु सरासर अनिशाको गल्ति देखिन्छ । कञ्चनलाई चिन्दिन भनेपनि उनले एक पटक अस्पतालमा गएर कञ्चनलाई भेटिन् भने सायद कञ्चन चाँडै निको हुन्छन् होला यस्तो सबैको विश्वास छ ।
आफुले नौं महिना आफ्नो कोखमा राखेर जन्माएर हुर्काएको आमालाई आफ्नै आखाँ अगाडी छोराले केटीकोलागी आफ्नो प्रा’ण त्या’ग्न ला’ग्दा र अस्पतालको बेडमा छ’ट्प’टाई’रहंदा ती आमाला’ई कति पि’डा भएको होला । उनको पि’डाको अनुभूति केवल गर्न सकिन्छ न कि भोग्न नै । उनै कञ्चनकी आमाले रुँदै मिडियामा आफ्नो छोरा र केटीको विषयमा यसरी आफ्ना कुरा सुनाएकी छिन् । भिडियोसहित
जब ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नै हान्यो छड्के, कर्मचारीहरुबिच भयो भागाभाग, हेर्नुहोस् भिडियो
ललितपुर । नागरिक समाजका अगुवा ज्ञानेन्द्र शाहीले आज ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा छड्के जाँच गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर कार्यालयमा छड्के हानेका हुन् । उनले त्यसरी सरकारी कार्यालयमा छड्को हान्दा उनको टोलीसंग त्याहाँका कर्मचरीले अभद्र व्यवहार गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनको भनाई अनुसार नागरिक समाजको अगुवाको नाताले जुनसुकै कार्यालयमा छड्के हान्ने अधिकार भएको बताएका छन् ।
आफुहरुमाथि अभद्र व्यावहार भएको भन्दै उनले त्यो कुरा त्याहाँका इन्चार्जलाई बताएका छन् । कार्यालय कर्मचारीले नै तँ त र म म भन्दै अभद्र व्यवहार गरेकोप्रति ज्ञानेन्द्र र उनका टीमले नै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी भएर नागरिक समाजको अगुवालाई त यस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन् भने अरु सेवा लिन कार्यालय आउने आम नागरिकलाई याहाँका कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्लान् ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।
कार्यलयमा छड्को जाँचकोलागी गएका ज्ञानेन्द्र र उनका टीमसंग चर्काचर्की परेको भिडियो सर्वाजनिक भई सकेको छ । उक्त भिडियोमा शाहीका टिमले अभद्र व्यवहार गर्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई सुझबुझका साथमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसरी सुझाव दिदै गर्दाको दृश्यमा उनीहरुले पनि कर्मचारीलाई थर्काएको देख्न सकिन्छ । भिडियोसहित
बिवाह गरेको ३ दिनमै श्रीमतीले छोडेपछि श्रीमानले पिडा सहन नसकेर चालेको कदमले प्रेमीहरुले भने यो कस्तो माया, सिंगो गाउँ नै एक जुट भएर युवतीको माइती घेरा हाल्न पुग्यो, हेर्नुहोस् भिडियो
चितवन । अनिशा र कञ्चन का-ण्डले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । आफैले बिहे गरेर सिउँदो भरेको श्रीमतीले नै आफुलाई चिन्दिन भनेपछि कञ्चनले वि- ष पि’एका थिए । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिनुको साटो झनझन बिग्रदै गईरहेको छ । उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैले उनी चाँडै नै निको हुने आशा गरिरहेको बेला डाक्टर कञ्चनको बाँच्ने सम्भावना केवल ५ प्रतिशत मात्र भएको बताएका छन् ।
यो खबर सुनेर अहिले कञ्चनको पक्षमा पुरै गाउँ नै उर्लिएको छ । सबैले अनिशा र उनको परिवारले सजाय पाउनु पर्छ भन्दै आवाज उठाएका छन् । गाउँलेहरुको भनाई अनुसार यदि कञ्चनलाई केही भईहाल्यो भने अनिशा र उनको परिवारलाई जेल हाल्छौं भन्दै पुरै गाउँलेहरुले नै आ’क्रोश व्यक्त गरेका छन् । गाउँलेहरुले अनिशालाई कुनै पनि हालतमा क्षमा नदिने र नछोड्ने बताएका छन् । माया गर्नु कञ्चनको कुनै दोष नभएको उनीहरुले बताउँदै यस्मा अनिशाकै कारणले कञ्चनको यो हालत भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
अनिशाले म चिन्दिन उहाँलाई भनेपछि कञ्चनले आफ्ना सबै आफ्न्तहरुलाई अनिशालाई गा’ली नगर्नु भन्दै आफुले यो संसार त्या’ग्ने निर्णय गरेर वि’ष से’वन ग’रेका थिए । कञ्चनले वि’ष से’व’न गरेदेखि उनको परिवारमा निकै त’ना’वको वातावरण श्रृजना भएको छ । कञ्चन घरको कान्छा छोरा हुन् । त्यसैले उनको यो अवस्था देखेर सबैभन्दा उनकी धेरै उनकी आमा रोएकी छिन् । छोरा निको हुने आशमा बसेकी कञ्चनकी आमालाई कस्तो भएको होला जब आज डाक्टरले कञ्चनको बाँच्ने चान्स केवल ५ प्रतिशत मात्रै छ भन्दा । भिडियोसहित
सोमबार बिहानै यि काम गर्नुहोस, तपाइहरुको मनोकांक्षा पूरा हुनेछ !
काठमाडौँ । सोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन्। सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ।
यसरी भारतीय बाटोबाट नेपालीलाई लगिन्छ अवैधरुपमा कतार, हेर्नुहोस् पैसाका लागि एजेन्टले केसम्म गर्दैनन् ?
काठमाडौं – नेपाल सरकारको अनुमतिबिना एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि नेपालीलाई अवैध रूपमा लैजाने गरेको
यि हुन् भारतीय हावा पत्रकार सुधिर चौधरीलाई विना अनुमती सगरमाथा आधार सिविर पुर्याउने नेपाली पाइलट सिद्धार्थ गुरुङ, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तरवार्ताका लिएपछि भारतीय टिभी जी न्युजका सम्पादक सगरमाथाको आधार
३२० रोपनी जग्गामा लगाइएको अफिम खेती प्रहरीले गर्यो नष्ट
धादिङ, ११ माघ – बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा ३२० रोपनी जग्गामा लगाइएको अफिम खेती प्रहरीले नष्ट
© 2021 OSNepal Inc.